Cod Bixi Adigoo Maqan | League of Women Voters
Qof kasta oo Maine ka diiwaangashan wuxu codbixin karaa goor hore isagoo. Waxaad ku codsan kartaa boostada, telefoonka ama online, ama adigoo tagaya xafiiska si aad codsato warqadaha codbixinta adigoo maqan. Wixii faahfaahin ah ee dheeraad ah, halkan ka riix Bogga Xoghayaha Gobolka. Markaad codsato, warqadahaagu waxay imanayaan Oktoobar. Warqadaha codbixintaadu waa in ay soo gaadhaan karraaniga magaaladaada ugu danbayn 8:00 galabnimo ee maalinta codbixinta, Noofembar 3.
Maalinta ugu danbaysa ee aad codsan karto inaad cod bixiso adigoo maqan waa jimcaha ka horreeya maalinta cod bixinta. Cod bixinta Noofembar 3, waxaad codsan kartaa in lagu siiyo waraaqaha cod bixiyaha maqan adigoo aan wax cudurdaar ah sheegan ilaa iyo Oktoobar 30 keeda. Wixii ka danbeeya Oktoobar 30 keeda waxaad codsan kartaa cod bixinta dadka maqan haddii sababahan mid ka mid ahi jirto: